यी ५ राशिका लागि निकै शुभ छ आजको दिन, हेर्नुहोस् आईतबारको राशिफल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यी ५ राशिका लागि निकै शुभ छ आजको दिन, हेर्नुहोस् आईतबारको राशिफल
डिसी नेपाल , ९ मङ्सिर २०७५
मेष : मेष राशी हुनेहरुका लागि आजको दिन निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। महत्वपूर्ण काम हात पर्ने योग रहेको छ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिन सक्छ । मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने बोल्दा विचार पुर्याउनु बेस हुनेछ।
वृष : वृष राशि हुनेहरुका लागि आजको दिन सामान्य खालको रहेको छ। जागिर तथा व्यापारमा सामान्य प्रगति हुनेछ । खानपानमा ध्यान नदिँदा पेट सम्बन्धी रोगले सताउला । आफ्नो काम गर्ने सैलीले आफैँलाई धोका हुनसक्छ । विश्वास गरिएका आफन्तबाट ठुलो धोका होला ।
मिथुन : पार्टनरसँग प्रेम र शारीरिक सुखको अपेक्षा रहला । कामकाजमा सफलता मिल्ला । जीवनसाथीको पूरानो सम्बन्धका विषयमा छलफल होला । साथीसँगको सम्बन्ध सुधारिएर जाला । ठुलो निर्णय लिँदा धोका हुनसक्छ। अनावश्यक विवादमा फँस्नुपर्ला । केही दिनदेखि रोकिएका कामहरु पूरा हुनेछन्।
कर्कट : ज्यादै खूशीको दिन हुनेछ । आफुलाई नियन्त्रणमा राख्नु उपयुक्त हुनेछ। धन सम्पत्तिमा जोडिएका कुनैपनि काम सफल हुनेछन्। काममा ध्यान दिनाले करियरमा बदलाप आउन सक्छ। पेट सम्बन्धी रोगले सताउला । प्रेममा सफलता मिल्ने योग रहेको छ भने पेशा व्यवसायमा उन्नती हुनेछ।
सिँह : नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ होला । साथीको कारणले नाम कमाउने सम्भावना रहेको छ। कुनै नयाँ कामको अवसर मिल्न सक्छ । नयाँ साथी भेट्टिने सम्भावना छ । मसलेदार खाना नखानु वेस होला । नतिाएको सफलताले व्यापक खूशी दिनेछ।
कन्या : आज चन्द्रमा तपाईको गोचर कुण्डली कर्मभावमा रहनेछन्। दुख हटेर जानेछ। जीवनसाथीसँग सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । धन नदिँदा पनि धनसम्पति जोडिनसक्छ । स्वास्थ्यमा सुधार होला । आफन्तबाट घात हुनसक्छ । परिवारमा खूशी मिल्नेछ।
तुला : आफन्तका कुराले मन चिन्तित रहला । दाजुभाईको ढाडसले मनोबल बढ्ने छ । मुहारमा चमक आउँदा काममा पनि सफलता मिल्ला । लामो दुरीको यात्रामा नजानु उचित हुनेछ भने मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ । आफन्तले तारिफ गर्ने छन्।
वृश्चिक : तपाईको सफलताको दिन रहेको छ। करिअरमा विकल्लप आउलान् । तपाईले चाहेको काम बन्ने छ। बोलीको कदर होला । साथी भाईको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम बन्न सक्छ । भविश्यका लागि बनाएका योजनाहरु सफल सावित होलान्। सन्तान सुख हुनेछ।
धनु : अविवाहितका लागि विवाहका प्रश्तावहरु आउलान् । तपाईको प्रभाव बढेर जाला । नयाँ काम सिक्ने अवसर मिल्ने छ। पठनपाठनमा मन जाला । लामो दुरीको रमाईलो यात्राको सम्भावना रहेको छ। विपक्षीसँग सचेत रहनुहोला । पति पत्नीबीच वादविवाद हुनसक्छ।
मकर : आर्थिक समस्या समाधान हुनेछन् । मनोरञ्जनको अवसर मिल्नेछ । नचिताएको सफलताले मनमा खूशी छाउला । पारिवारिक भेटघाटले नयाँ योजनाहरु बन्ने छन् भने स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
कुम्भ : व्यापार व्यवसाय गर्नेका लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। आशा मारेको ठाउँबाट धन लाभ होला । आज तपाईले राम्रै बोल्दा पनि नराम्रो हुनसक्छ । विपक्षीहरु सलवलाउन सक्छन् बोल्दा विचार पुर्याउनु उचित हुनेछ।
मीन : परिवारका लागि समय दिनुपर्ने छ। काममा सफलता हुनेछ । विश्वास गरिएका व्यक्तिबाट नै धोका हुनसक्छ। स्त्री वर्षबाट काममा वाधा होला । साथीभाईको सहयोगमा नयाँ कामहरु बन्न सक्छन्। यात्राको योग रहेपनि परिवारका कारण अवरोध होला । तपाईको एक शब्दले विपक्षीहरु मौन हुनेछन्।